Home » Lahatsoratra farany farany » Airport » Ny tavanao no karapanondro vaovao ho an'ny Travel: Tsy maninona ny biometrika!
Airlines • Airport • Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao farany Brezila • Vaovaom-panjakana • Vaovao • teknolojia • Tourism
Miaraka amin'ny fisavana antontan-taratasy fanampiny momba ny COVID-19, maharitra kokoa ny fotoana fanodinana any amin'ny seranam-piaramanidina. Talohan'ny COVID-19, nandany 1.5 ora ny mpandeha amin'ny fizotry ny dia (fidirana, fiarovana, fanaraha-maso ny sisintany, ladoany ary fitakiana entana). Ny angon-drakitra amin'izao fotoana izao dia manondro fa ny fotoam-pikarakarana ny seranam-piaramanidina dia nitombo hatramin'ny adiny 3 nandritra ny fotoana be indrindra ary ny habetsahan'ny dia eo amin'ny 30% eo ho eo amin'ny ambaratonga talohan'ny COVID-19.
Ny International Air Transport Association (IATA) dia nanambara ny valin'ny 2021 Global Passenger Survey (GPS), izay namoaka fehin-kevitra roa lehibe:
Te hampiasa famantarana biometrika ny mpandeha raha manafaingana ny fandehanana.
Te handany fotoana kely milahatra ny mpandeha.
“Niteny ny mpandeha ary maniry ny hiasa mafy kokoa ny teknolojia, ka tsy dia mandany fotoana firy amin'ny 'fikarakarana' na filaharana izy ireo. Ary vonona ny hampiasa angon-drakitra biometrika izy ireo raha manome io vokatra io. Alohan'ny fiakaran'ny fifamoivoizana dia manana varavarankelin'ny fotoana hiantohana ny fiverenana milamina amin'ny dia aorian'ny areti-mifindra isika ary hanatsara ny fahombiazana maharitra ho an'ny mpandeha, zotram-piaramanidina, seranam-piaramanidina ary governemanta, ”hoy i Nick Careen, filoha lefitry ny IATA ho an'ny Operations. Fiarovana sy fiarovana.
Ny 73% amin'ny mpandeha dia vonona ny hizara ny angona biometrika mba hanatsarana ny fizotran'ny seranam-piaramanidina (miakatra 46% tamin'ny taona 2019).
88% no hizara vaovao momba ny fifindra-monina alohan'ny hiaingana ho an'ny fanodinana haingana.
Maherin'ny ampahatelon'ny mpandeha (36%) no niaina ny fampiasana angona biometrika rehefa mandeha. Amin'ireo, 86% no afa-po tamin'ny traikefa.
Ny fiarovana ny angon-drakitra dia mijanona ho olana lehibe miaraka amin'ny 56% mampiseho ahiahy momba ny fanitsakitsahana ny angon-drakitra. Ary ny mpandeha dia mila mazava amin'ny hoe iza no mizara ny angon-dry zareo (52%) sy ny fomba ampiasana/fikarakarana azy (51%).
Ny 55%-n'ny mpandeha dia nahatsikaritra ny filaharana amin'ny fiondranana ho faritra ambony ho fanatsarana.
Ny 41% n'ny mpandeha dia nahatsikaritra ny filaharana amin'ny fisavana fiarovana ho laharam-pahamehana amin'ny fanatsarana.
Ny 38% n'ny mpandeha dia nahita ny fotoana filaharana amin'ny fanaraha-maso ny sisintany / fifindra-monina ho faritra ambony ho fanatsarana.
Ny fitomboan'ny fiandrasana lehibe indrindra dia amin'ny fisavana sy fanaraha-maso ny sisintany (fifindra-monina sy fifindra-monina) izay anamarinana ny fahazoan-dàlana ara-pahasalamana ho an'ny taratasy.
Mihoatra ny fotoana tian'ny mpandeha holaniana amin'ny fizotran'ny seranam-piaramanidina izany. Ny fanadihadiana dia nahita fa:
Ny 85%-n'ny mpandeha dia te handany latsaky ny 45 minitra amin'ny fizotran'ny seranam-piaramanidina raha toa ka mitondra entana tanana fotsiny izy ireo.
Ny 90%-n'ny mpandeha dia te handany adiny iray latsaka amin'ny dingana eny amin'ny seranam-piaramanidina rehefa mandeha miaraka amin'ny kitapo voamarina.
Ny IATA, miara-miasa amin'ireo mpandray anjara amin'ny indostria, dia manana programa matotra roa izay afaka manohana ny fampivoarana mahomby ny fiaramanidina aorian'ny areti-mifindra ary manome traikefa haingana izay takian'izy ireo.
IATA Travel Pass dia vahaolana amin'ny fitantanana ireo fahazoan-dàlana ara-pahasalamana marobe izay takian'ny governemanta. Ny fampiharana dia manolotra fomba azo antoka sy azo antoka ho an'ny mpandeha mba hanamarina ny fepetra takiana amin'ny diany, hahazo valim-panadinana ary hijery ny mari-pankasitrahana momba ny vaksiny, hanamarina fa mahafeno ny toerana haleha sy ny fitateram-pitaterana ary mizara izany amin'ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana sy ny zotram-piaramanidina alohan'ny hiaingana sy hampiasana. e-vavahady. Izany dia hampihena ny filaharana sy ny fitohanana amin'ny fisavana antontan-taratasy—ho tombontsoan'ny mpandeha, zotram-piaramanidina, seranam-piaramanidina ary ny governemanta.
ID iray dia fandraisana andraikitra manampy ny indostrian'ny tetezamita mankany amin'ny andro ahafahan'ny mpandeha mivezivezy eny amin'ny sisin-dalana mankany amin'ny vavahady amin'ny fampiasana mari-pamantarana fitsangatsanganana biometrika toy ny tava, fanondro na iris scan. Ny zotram-piaramanidina dia ao ambadiky ny hetsika. Ny laharam-pahamehana amin'izao fotoana izao dia ny fiantohana ny fisian'ny didy amam-pitsipika hanohanana ny vinan'ny traikefa fitsangatsanganana tsy misy taratasy. Ny ID iray dia tsy vitan'ny hoe hahomby kokoa ny fizotran'ny mpandeha, fa hamela ny governemanta hampiasa ireo loharano sarobidy amin'ny fomba mahomby kokoa.
"Tsy afaka miverina amin'ny fomba 2019 fotsiny izahay ary manantena ny ho afa-po ny mpanjifanay. Talohan'ny areti-mifindra dia niomana ny hitondra ny serivisy ho amin'ny ambaratonga manaraka miaraka amin'ny One ID. Ny krizy dia mahatonga ny fampanantenana kambana momba ny fahombiazana sy ny fitsitsiana ny vidiny ho maika kokoa. Ary tena mila teknolojia toa ny IATA Travel Pass izahay mba ahafahana mamerina ny serivisy ho an'ny tena na ho tototry ny fisavana antontan-taratasy ny fanarenana. Ny valin'ny GPS dia porofo iray hafa fa ilaina ny fanovana, "hoy i Careen.
Momba ny GPS
Ny valin'ny GPS dia mifototra amin'ny valiny 13,579 avy amin'ny firenena 186. Ny fanadihadiana dia manome fanazavana momba izay tian'ny mpandeha amin'ny traikefany amin'ny dia an'habakabaka. Tsidiho ity rohy hidirana amin'ny fanadihadiana feno.